Apple Face ID အား စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေ – DigitalTimes.com.mm
929 Shares 738 Views
Ko Thuya Sep 15, 2017
Apple က မျက်နှာအာရုံခံ လုံခြုံရေး စနစ်ကို iPhone X နဲ့အတူ အင်္ဂါနေ့က မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ နည်းပညာဟာ ပိုင်ရှင် ဖြစ်သူက ဖုန်းမှာ သူ့ရဲ့ မျက်နှာကို မှတ်ပုံတင်ထားရခြင်း ဖြစ်ပြီး ဖုန်းက ပိုင်ရှင်ရဲ့ မျက်နှာကို မှတ်မိပါတယ်။ ပိုင်ရှင်ရဲ့ မျက်နှာကို ဖုန်း ကင်မရာကနေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးမှ ဖုန်းကို Unlock လုပ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Passcode များ ရိုက်ထည့်ရတဲ့ အလုပ်ရှုပ်မှု မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ နည်းစနစ်ဟာ အားနည်းချက်များ ရှိနေပြီး ဖုန်းမှ ဒေတာများကို ခိုးယူချင်သူများအတွက် လွယ်ကူစေတယ်လို့ အမေရိကန် အာဏာပိုင်များ အပါအ၀င် ပညာရှင်များက ပြောပါတယ်။
လူမှုကွန်ရက်မှ လူများစွာကလည်း ရဲများရဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု ခံရသူများအတွက် သူတို့ရဲ့ iPhone X မှ ဒေတာများကို ရဲများက ရယူချင်ရင် Face ID က အလွန် လွယ်ကူစေတဲ့အတွက် စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြပါတယ်။ ရဲများက ဖုန်း ကင်မရာကို သင့်မျက်နှာအား ချိန်ရွယ်လိုက်တာနဲ့ သင့်ဖုန်းကို Unlock လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ် AI Franken က Face ID ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများကို မေးမြန်းထားတဲ့ စာတစ်စောင်ကို Tim Cook ထံပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစာမှာ “ လူတစ်ဦးက ဖုန်းကို ပိုင်ရှင်ရဲ့ မျက်နှာအား ချိန်ရွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာ iPhone X ကို Unlock လုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးအောင် Apple က ဘယ်လိုလုံခြုံရေးစနစ်ကို အသုံးပြုထားသလဲ
? တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အာဏာပိုင်များက Users များနဲ့ Face ID ဒေတာများကို တောင်းယူရင် Apple က ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ? “ စတဲ့ စာသားများ ပါဝင်ပါတယ်။
Selfie ကနေ 3D Face များ ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ AI Program